HALATRA TENY ISOTRY :: Mpandroba nifanenjehana tany an'elankelan-trano • AoRaha
HALATRA TENY ISOTRY Mpandroba nifanenjehana tany an’elankelan-trano
Niara-nientana ny fokonolona sy ny mpitandro filaminana nanenjika lehilahy roa, 24 taona sy 31 taona, voatondro ho mpangalatra teny Anatihazo Isotry, ny harivan’ ny zoma lasa teo. Hatrany an’elankelan-trano ny fifanenjehana. Voasambotra ny niafaran’izy ireo. Voasoroky ny pôlisy, araka izany, ny fikasan’ireo olona marobe saika hikasi-tanana azy roa lahy ireo.
Trano iray no lasibatra, tamin’io zoma hariva io. Nanararaotra ny fahitana ny varavarana nivoha ireto lehilahy roa. Niditra moramora tao an-trano iretsy farany. Resin-tory ihany koa ny tompon-trano. Naka izay zakan’ny tanany ireo olon-dratsy. Taitra tampoka anefa ny tompon-trano ary niantso vonjy. Nirifatra nitsoaka ireo mpangalatra.
Naheno ny antsoantso ny teo amin’ny manodidina. Nisy ny nampandre haingana ny pôlisy eny amin’ny Kaomisaria eny Isotry.
«Nilaza izy roa lahy ireo fa nitady olona no nahatongavany tao amin’io trano io fa tsy nangalatra. Mbola tratra teny amin’izy ireo anefa ny finday sy paoketra nisy vola tao amin’ilay trano lasibatra », hoy ny pôlisy.
LOZAM-PIFAMOIVOIZANA :: Mpandeha taksiborosy iray namoy ny ainy, folo hafa naratra